I-Global Ecommerce: Okuzenzakalelayo vs Umshini vs Abantu Ukuhumusha Kwasendaweni | Martech Zone
I-Global Ecommerce: Okuzenzakalelayo vs Machine vs People Translation for Localization
NgoLwesithathu, Novemba 18, 2020 NgoLwesithathu, Novemba 18, 2020 U-Augustin Prot
I-cross border ecommerce iyachuma. Ngisho nje eminyakeni engu-4 edlule, a Umbiko kaNielsen uphakamise lokho U-57% wabathengi ubethengile kumthengisi waphesheya kwezilwandle ezinyangeni eziyisithupha ezedlule. Ezinyangeni ezedlule i-COVID-6 yomhlaba wonke ibe nomthelela omkhulu ekuthengiseni emhlabeni wonke.
Ukuthengwa kwezitini nosimende kwehle kakhulu e-US nase-UK, ngokuncipha kwemakethe yezitolo e-US kulo nyaka kulindeleke ukuthi iphindwe kabili okwenzeka enkingeni yezezimali eminyakeni eyishumi eyedlule. Ngasikhathi sinye, sibonile ukuqhuma okukhulu kwe-e-commerce enqamula umngcele. UkudayisaX izilinganiso ukuhweba ngomngcele e-commerce e-EU kukhule ngama-30% kulo nyaka. E-US, idatha evela ku- I-Global-e itholakele ukuthi ezentengiselwano zomhlaba wonke zase zikhule ngama-42% ngoMeyi kulo nyaka.
Nomaphi lapho umkhiqizo wakho wokuthengisa usekelwe ekuthengisweni kwamazwe omhlaba kungaba ngumugqa wokuphila. Akumangazi ukuthi abathengisi emhlabeni wonke bafuna ukuthatha le ngxenye ekhula njalo yebhizinisi elisha. Kodwa-ke, ukubamba kahle abathengisi abathengi abanqamula imingcele kudingeka badlulele ngale kokunikeza ukuhumusha kwesiza lapho isivakashi sesihlala endaweni yabo.
Abahlinzeki be-ecommerce kumele bafake indawo kumasu abo okukhula. Lokhu kusho ukucubungula izinto ezinjenge-SEO yolimi lwendabuko, ukuhlinzeka ngezithombe ezifanele imakethe yendawo - uma ungumthengisi waseYurophu ozama ukuthengisa emakethe yase-Asia, usebenzisa kuphela izithombe ezi-centric ze-euro kusayithi lakho kuzokhipha ikhasimende elingaba khona.
Ukwenza okwasendaweni kuqinisekisa ukuthi isayithi lakho licubungula wonke ama-nuances amasiko ezifunda ozama ukuzithengisela zona.
Lokhu kungabonakala njengomsebenzi ongenakwenzeka. Izindawo eziningi zokuthengisa zinamakhasi amaningi avuselelwa njalo futhi ukuqasha abahumushi abangochwepheshe kungabiza kakhulu. Ngasikhathi sinye, abaningi bangabheka ukuhunyushwa komshini nokwenza okwasendaweni njengokudwetshiwe futhi kungalungile kakhulu ukuthembela kukho. Kepha njengoba noma ngubani osebenzisa isoftware yokuhumusha umshini azi, ubuchwepheshe buyathuthuka ngaso sonke isikhathi. Ubuchwepheshe bungaba ithuluzi eliyigugu ngokumangalisayo lokwenziwa kube kuwebhu, futhi uma kuhlanganyelwe nabantu bangempela, kungafinyelela ezindaweni eziphakeme kakhulu.
Ukuhumusha okuzenzakalelayo vs Machine
Umbono oyiphutha ovamile ngukuthi ukuhumusha okuzenzakalelayo kuyinto efanayo ne ukuhumusha ngomshini. Ngokusho kwe- I-Globalization and Localization Authority (i-GALA):
Ukuhumusha Komshini - Isoftware ezenzakalelayo ngokuphelele engahumushela kokuqukethwe komthombo ezilimini eziqondiwe. Ubuchwepheshe bokuhumusha imishini bufaka abahlinzeki abanjengo-Google Translate, i-Yandex Translate, i-Microsoft Translator, i-DeepL, njll. Kepha laba bahlinzeki bemishini yokuhumusha abafakwa kuwebhusayithi bavame ukumboza kuphela izilimi zomdabu lapho isivakashi sisendaweni.
Ukuhumusha Okuzenzakalelayo - Ukuhumusha okuzenzakalelayo kufaka ukuhumusha komshini kepha kudlulela ngalé kwalokho. Ukusebenzisa isixazululo sokuhumusha akusebenzeli nje kuphela ukuhunyushwa kokuqukethwe kwakho kepha nokuphathwa nokuhlelwa kokuqukethwe, i-SEO yawo wonke amakhasi ahunyushiwe, bese kusingathwa ukushicilelwa kwalokhu okuqukethwe ngokuzenzekelayo, okungenzeka kuphile ngaphandle kokuthi uphakamise umunwe. Kubathengisi, okukhishwa kulolu hlelo lobuchwepheshe kungakhuphula ukuthengiswa kwamazwe omhlaba futhi kubiza ngendlela emangalisayo.
Abantu vs Ukuhumusha Komshini
Enye yezingqinamba ezinkulu zokusebenzisa ukuhumusha komshini ngokwasendaweni ukunemba. Abathengisi abaningi banomuzwa wokuthi ukuhumusha okugcwele komuntu ukuphela kwendlela enokwethenjelwa eya phambili. Izindleko zalokhu, noma kunjalo, zinkulu futhi ziyenqabela abathengisi abaningi - ingasaphathwa eyokuthi akunandaba ukuthi lokho okuqukethwe okuhunyushiwe kuzoboniswa kanjani empeleni.
Ukuhumusha ngomshini kungakongela isikhathi esiningi futhi ukunemba kuncike kuzilimi ezimbili ezikhethiwe nokuthi amathuluzi okuhumusha athuthukiswe futhi anekhono kangakanani kulawo maqembu. Kepha yisho, njengoba i-ballpark ilinganisela ukuthi ukuhumusha kuhle ngama-80% esikhathi, konke okudingeka ukwenze ukuthola umhumushi okhokhelwayo ukuze aqinisekise futhi ahlele ukuhumusha ngokufanele. Ngokuthola ungqimba wokuqala wokuhumusha umshini usheshisa inqubo yokwenza iwebhusayithi yakho ibe nezilimi eziningi.
Ngokombono wezezimali, lokhu kukhetha ukucatshangelwa okukhulu okufanele kwenziwe. Uma uqasha umhumushi oyingcweti ukuqala kusukela ekuqaleni futhi usebenze ngamanani amaningi wamakhasi ewebhu, ibhili oyikhokhayo kungenzeka ibe yinkanyezi. Kepha uma wena isiqalo ngongqimba wokuqala wokuhumusha komshini bese uletha abahumushi abangabantu ukuthi benze ukulungisa lapho kunesidingo (noma mhlawumbe iqembu lakho likhuluma izilimi eziningi) kokubili umthwalo wabo wokusebenza kanye nezindleko zizokwehliswa kakhulu.
Ukwenza okwenziwa kuwebhusayithi kungabonakala njengephrojekthi esabekayo, kepha kusingathwa kahle ngokuhlanganiswa kobuchwepheshe namandla abantu akuwona umsebenzi omkhulu njengoba ucabanga. I-ecommerce enqamula umngcele idinga ukuthi kube isu labakhangisi eliqhubekela phambili. UNielsen ubika lokho 70% wabathengisi lokho okwakudlulele ekuhwebelaneni nomngcele we-e-commerce kwaba inzuzo ngemizamo yabo. Noma yikuphi ukuthengiselana okwenziwa kwasendaweni kufanele kube nenzuzo uma kwenziwa ngempumelelo ngobuchwepheshe nemikhawulo yobuchwepheshe engqondweni.
Tags: ukuhumusha okuzenzakalelayoDeepLezentengiselwano zomhlaba wonkeezomnotho emhlabeni jikeleleukuhunyushwa kolimiindawokwasendaweniukuhumusha ngomshiniukuhunyushwa kolimi ngesandla
U-Augustin ungumsunguli we weglot, isixazululo sezilimi eziningi samawebhusayithi. Idalwe ngo-2016 - iWeglot yakhelwe ukwenza ukuhumusha kwewebhusayithi kusheshe, kube lula, futhi kusheshe. Ngokwazi kwezezimali, u-Augustin wathuthela ezweni le-SaaS ukuze athole isixazululo esisiza izinkampani ukuthi zikhiqize ukukhula komhlaba wonke.
Ungakhasa Kanjani Isiza Esikhulu Futhi Ukhiphe Idatha Usebenzisa Ukumemeza Kwexoxo le-SEO Spider
I-KosmoTime: Dala Imisebenzi Ebeka Isikhathi Kukhalenda Lakho